Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့် (434-07-1) hplc≥98% | AASraw အမှုန့်
Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့်
SKU: 434-07-1. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Oxymetholone ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Anadrol) အမှုန့် (434-07-1) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်လှုံ့ဆော်ကြောင့်ပေးမြောက်မြားစွာသက်ရောက်မှုများအတွက်အားကစားသမားများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ကြားတွင်ယင်း၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ အလေးချိန်ဆက်ထိန်းထား, Anadrol အမှုန့်အလေးချိန်အမြတ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ယူဆခဲ့သည်။ အဆိုပါအစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အပြင်, ကလည်းအစွမ်းသတ္တိအားအဖြစ်သွေးနီဆဲလ်အရေအတွက်ရရှိမှုအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 172-180 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Oxymetholone (Anadrol) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Oxymetholone အမှုန့်ကိုလည်း Anadrol အမှုန့်, A-ဗုံးနှင့် A50 အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ကုန်ကြမ်း Oxymetholone အမှုန့်အသုံးပြုမှု
50 မီလီဂရမ် / Dianabol ၏နေ့မှ Anadrol အမှုန့်ထည့်သွင်းခြင်းတစ်ဦး Steroid တစ်မျိုးသံသရာမှနည်းနည်းကဆက်ပြောသည်အကျိုးအတွက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ ဆနျ့ကငျြဘအတွက် 50-100 မီလီဂရမ် / နေ့ trenbolone acetate သို့မဟုတ် 60-80 မီလီဂရမ် / နေ့မှ Anavar (oxandrolone) Anadrol အမှုန့်ထည့်သွင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုပေးသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုမှု 50-150 မီလီဂရမ် / နေ့ဖြစ်၏။ အချို့ကိစ္စများတွင်ထိုကဲ့သို့သော 300 မီလီဂရမ် / နေ့အဖြစ်ပိုကြီးတဲ့ဆေးများအသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်တော်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်အခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူ stacked အခါ, မကြာခဏမီလီဂရမ် / နေ့ 150 ကျော်လွန်ထံမှနည်းနည်းနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Oxymetholone အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
Anadrol အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများလည်းအသုံးပြုမှုကိုအပြီးတဖြည်းဖြည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ သက်ရောက်မှုတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားလျှင်အဘယ်ကြောင့်ဒီအမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအနှောက်အယှက်? ကောင်းပြီ, Anadrol အမှုန့်သည်သင်တို့အထဲ၌ကန်အခြားတိုးမြှင့်ဒြပ်ပေါင်းများကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သိသိသာသာသင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေမယ့်ယာယီတိုးတက်မှုအဖြစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြည်းဖြည်းသင်အချိန်ဝယ်ယူနှငျ့သငျ 100% မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ထုတ်စတင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အစားအသုံးစရိတ်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လ ဒါဟာသို့သွား။
Anadrol အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများလူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးမှကွဲပြားပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပါလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပေမည်။ သင့်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်း၏ပထမဦးဆုံး3ရက်သတ္တပတ်အတွင်းတော်တော်လေးသာရှိပြီးအကျိုးအမြတ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုယေဘုယျအားဖြင့်ထိုနောက်မှထွက်မြင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်အလားအလာလျှော့ချရန်, သင့်သောက်သုံးသောထွက်တိုင်းတာဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ။
ကုန်ကြမ်း Anadrol အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း Oxymetholone အမှုန့်စျေးကွက်
Oxymetholone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို; AASraw ထံမှ Anadrol အမှုန့်ကိုဝယ်
AASraw သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Oxandrolone / ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ Anavar ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Anadrol အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း: